नेकपासहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीहरुको संयुक्त वैठक, के-के भए निर्णय ? — Imandarmedia.com
नेकपासहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीहरुको संयुक्त वैठक, के-के भए निर्णय ?
काठमाडौं । राष्ट्रघातका विरुद्ध ४ कम्युनिस्ट पार्टीहरुले संयुक्त संघर्ष थाल्ने भएका छन् । बुधबार बसेको चार कम्युनिस्ट पार्टीहरुको संयुक्त बैठकले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका समस्याहरुलाई लिएर संयुक्त संघर्ष थाल्ने निर्णय गरेको छ।